मच्छिन्द्र आहा! रारा गोल्डकपको सेमिफाइनलमा – Khel Dainik
मच्छिन्द्र आहा! रारा गोल्डकपको सेमिफाइनलमा
पोखरा (खेलदैनिक) । साविक विजेता संकटा क्लबलाई हराउँदै नेपालको लिग च्याम्पियन मच्छिन्द्र फुटबल क्लब जारी २०औं आहा! रारा गोल्डकप अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण फुटबल प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ ।
पोखरा रंगशालामा सोमबार भएको तेस्रो क्वाटरफाइनलमा मच्छिन्द्रले संकटाको चुनौति ४–१ ले पन्छाउँदै अन्तिम चारमा स्थान सुरक्षित गरेको हो । खेलमा शुरुवाती अग्रता पनि मच्छिन्द्रले बनाएको थियो । १३औं मिनटमा उत्सव राईको गोलबाट मच्छिन्द्रले खेलमा खाता खोल्यो ।
त्यस्तै दोस्रो हाफको ४६औं मिनटमा मेसुकेले मच्छिन्द्रको त्यो अग्रता दोब्बर पारे । यद्यपि ६३औं मिनटमा गणेश हमालले संकटाका लागि गोल फर्काउँदै टोलीलाई पनि खेलमा फर्काउन प्रयास गरे । तर सफल भएनन् । खेलको अन्तिमतिर संकटाले थप दुई गोल खान पुग्यो ।
८४औं मिनटमा अभिषेक गुरुङले तेस्रो गोल गर्दा त्यसको तीन मिनट लगतै मेस्केले चौथो गोल थप्दै मच्छिन्द्रको जित सुनिश्चित गरेका थिए । खेलमा मच्छिन्द्रका मेसुके म्यान अफ द म्याच समेत चुनिए । उनले पुरस्कार वापत नगद ८ हजार र ट्रफी हात पारे ।
प्रतियोगिता अन्तरगत माघ ११ गते मंगलबारको अन्तिम क्वाटरफाइनल खेल दुई दावेदार टोली रुस्लान थ्रीस्टार क्लब र त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लबबीच हुने आयोजकले जनाएको छ ।
← राष्ट्रिय महिला फुटबल लिग स्थगित नेपाल आइपुग्यो मौरिससको फुटबल टोली →